भिक्टोरियामा कोरोनाका दुई नयाँ संक्रमित भेटिए, चार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीमा पनि संक्रमण « MNTVONLINE.COM
भिक्टोरियामा कोरोनाका दुई नयाँ संक्रमित भेटिए, चार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीमा पनि संक्रमण
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा लगाइएको २ साताको लकडाउन सकिएको चौथो दिन पनि कूल ६ नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यसमध्ये चार जना अन्तर्राष्ट्रिय यात्री भएको र दुई जना स्थानीय समूदायमा कोरोना संक्रमण पाइएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । महामारीको उछालका समयमा गरिने ४० हजार हाराहारीको परीक्षण यतिबेला १५ हजार करिबमा सीमित बनेको छ । यी दुई नयाँ संक्रमित अहिलेको कोरोना संक्रमितकै कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरु भएका कारण खासै चिन्ता नथपिएको अधिकारीहरुको भनाई छ ।
अहिले चिन्ताको विषय भने नसुल्झिएका ६ केशहरु हुन् जसको संक्रमण उद्गम नै पत्ता लाग्न सकेको छैन । उलर्टमा देखिएको कोरोना संक्रमण र आरकेयर एज्ड केयरबीचको सम्बन्ध नै स्थापित हुन नसक्नु चाहीँ चिन्ताको विषय भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
गएको २४ घण्टामा १६ हजार ९ सय ३२ परीक्षणका नतिजा प्राप्त भएका थिए भने अब राज्यमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ६४ मात्र छ । यस्तै यही अवधिमा १३ हजार ७ सय ६४ जनाले कोभिड १९ कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
यससँगै राज्यमा कोरोनाको खोप लगाउनेको संख्या करिब ८ लाख पुगेको छ ।
जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पायो !
जसपा विवादमा तटस्थ बसे रेशम चाैधरी
डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगमा लगियो
दलीय द्वन्द्वमा दबिएको कर्णाली प्रदेशसभा !
उपत्यकामा पुनः थपियो निषेधाज्ञा